2017 - Page 135 of 135 - Puntland Mirror Believable Media Website
[ February 18, 2020 ] Mareykanka oo duqeyn ku burburiyay xarun ay Al-Shabaab ku lahayd magaalada Jilib	Somalia
[ February 17, 2020 ] Bandhiga Carwada Ganacsiga Puntland oo ka furmatay Boosaaso	Puntland
January 2, 2017 Puntland Mirror 0
Mogadishu-(Puntland Mirror) At least three people have been killed in a car bomb blasts near AMISOM base in the Somalia’s capital Mogadishu on Monday, official said. One bomber drove a car into a checkpoint outside […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Isfahamka guud ee heshiiska shaqaalaynta muwaadiniita Soomaaliyeed ee dalka Sucuudi Caraabiya ayaa lasoo gabagabeeyay, sida ay sheegeen ilo-wareedyo diblomaasi oo Soomaali ah. “Wasiirka shaqaalaha Soomaaliya ayaa booqan doona boqortooyada Sucuudiga dhawaan si uu […]
January 1, 2017 Abdi Omar Bile 0
Istanbul-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta oo Sabti ah sheegay in Turkiga uu sii wadi doono la dagaalanka argagixisada iyo kuwa taageera “ilaa iyo laga soo afjarayo.”, sida ay ku warantay […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s new federal parliament on Saturday chosen the election committee for the new speaker of the parliament. Five teen members of the parliament were elected as the election committee for the new speaker […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xildhibaanada baarlamaanka cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Sabti ah doortay guddiga doorashada guddoomiyaha baarlamaanka kadib kulan ay ku yeesheen Muqdisho. 15 xubnood oo baarlamaanka katirsan ayaa loo doortay guddiga qabanqaabada […]
January 1, 2017 Puntland Mirror 0
Qardho-(Puntland Mirror) Boqolaal reer guuraa ah ayaa wali kusii socda deegaanada hoostaga degmada Bender Bayla ee gobolka Karkaar halkaas oo dhawaan roobab ka da’een, sida ay wararku sheegayaan. Asbuucyadii lasoo dhaafay ayaa deegaanada miyiga Dhuudo […]
Jabuuti-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Talaado ah safar ku tagay dalka Jabuuti. Madaxweyne Deni ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay masuuliyin sare oo katirsan dowladda Jabuuti oo ay [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa duqeyn cirka ah ku burburiyay xarun ay lahaayeen maleeshiyada Al-Shabaab, sida Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ay ku sheegeen war-saxaafadeed maanta oo Talaado ah. Duqeynta ayaa Isniintii ka dhacday Jilib, [...]